पल सैमुअल्सन - विकिपिडिया
१ पल सैमुअल्सन
३ सैमुअल्सन र उनको इकोनोमिक्स पुस्तक
४ पुस्तकका केही उकाली ओराली
५ पुस्तकको लोकप्रियताको यो रुप
पल सैमुअल्सन[सम्पादन गर्ने]
चित्र:Paul A Samuelson)
मुख्य योगदान– म्याक्रो अर्थशास्त्र
कार्यरत संस्था– एम आइ टी मा प्रोफेसर
अर्थशास्त्र सम्प्रदाय– नवकेन्सीयन
अर्थशास्त्रमा योगदान– नवक्लासिकल केन्स समन्वय, गणितीय सम्प्रदाय, अर्थशास्त्रीय विधिप्रणाली
सम्मानित– अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार सन् १९७०
पल ए सैमुअल्सनको जन्म मई १५, सन् १९१५ मा इन्डियाना, यु एस ए मा भएको हो । उनको मृत्यु ९४ वर्षको उमेरमा दिसम्बर १३, सन् २००९ मा भएको हो । उनी एम आ टी का प्रोफेसर पदमा कार्यरत रहेका थिए । सैमुअल्सनको पुस्तक इकोनोमिक्स Economics, अर्थशास्त्रको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पुस्तक मानिन्छ । सन् १९४८ मा प्रथम पटक फाउन्डेशन्स अफ इकोनोमिक्सको नामबाट प्रकाशित यस वर्तमान समयका एक ज्यादै प्रभावशाली अर्थशास्त्री हुन् पल एन्थनी सैमुअल्सन । यद्यपि उनले केवल दुईवटा पुस्तक रचना गरेका छन् । तर अर्थशास्त्र विषयलाई लोकप्रियता दिलाउन उनको ठूलो भूमिका छ । पुस्तकको सन् १९९७ मा १४ वटा संस्करण प्रकाशित भइसकेका छन् भने हालसम्म विश्वका ३८ भाषामा यो पुस्तक अनूदित भइसकेको छ । इकोनोमिक्स पुस्तक र सैम्युअल्सन एक अर्काका पर्यायवाची जस्तै भएका छन् ।अध्ययनरत छंदा उनी अर्थशास्त्रका मेधावी छात्र मानिन्थे । उनको क्षमताको अनुमान यस कुराबाट गर्न सकिन्छ कि उनले स्नातक अध्ययन गर्दा लेखेको थीसिसको विषय Foundations of Economics ले नै भविष्यमा उनलाई नोबेल पुरस्कार प्रदान गरेको हो ।
सैमुअल्सन र उनको इकोनोमिक्स पुस्तक[सम्पादन गर्ने]
सन् १९४५मा म्यासाचुसेट्स इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलोजी विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयका विभागीय प्रमुख राल्फ फ्रीम्यानले एउटा सुरुचिपूर्ण पाठ्य पुस्तक लेख्न आग्रह गर्नु भयो । यस आग्रहले सैमुअल्सन दोमन हुन पुगे । किनभने त्यस बेला पनि पाठ्य पुस्तकको लेखन कार्य उच्च स्तरीय बौद्धिक कार्यको रुपमा लिईंदैनथ्यो । तर सैमुअल्सनलाई संझना भयो ः यदि लिन्यूस पलिग जस्ता मानवतावादी विद्वान जसले दुइ दुइवटा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्, उनले रसायन शास्त्रको पाठ्य पुस्तक लेख्न हुन्छ भने सैमुअल्सन कुन ड्याङको मूला हो र ? यस विचारबाट प्रेरित भएर उनले पुस्तक लेख्न सुरु गरे । विभागीय प्रमुखले सैमुअल्सनलाई पाठ्यक्रम, विषय वस्तु र त्यसलाई कतिसमयमा सिद्ध्याउने जस्ता कुराको निर्णय आफैं गर्ने स्वतन्त्रता दिए । एडम स्मिथ जस्ता दार्शनिकले सुरु गरेको र संभवतः सबैभन्दा प्रतिभाशाली विद्वान जे एस मिलको पालामा अर्थात् सन् १८४८ मा निकै शीर्ष स्थानमा पुगेको यो विषय प्रो. मार्शलको समयमा अर्थात् सन् १८९० मा आइ पुग्दा यस विषयले एउटा मोड पार गर्यो । तर त्यस पछिका ५० वर्षमा यस विषयले सामयिक परिवर्तन अनुरुप समायोजन नगर्दा यो विषय निरस हुन पुगेको थियो । यस विषयका कक्षाहरु लामा र पट्यार लाग्दा हुन्थे । पढाइरहेका शिक्षकले विद्यार्थीहरुलाई कक्ष्ाँमा हाई... गरेको हेर्नु पथ्र्यो । तसर्थ यस्तो असजिलो समयमा पाठ्य पुस्तक लेख्न अह्राउने र त्यस चुनौतीलाई स्वीकार्ने दुवैलाई भविष्यद्रष्टा मान्नु पर्दछ ।
न्यूजवीक जस्तो प्रसिद्ध पत्रिकामा लगातार १० वर्ष आर्थिक स्तम्भ लेखक स्याम्युएल्सनका दर्जनौं तर ज्यादै महत्वपूर्ण आर्थिक लेखहरु प्रकाशित छन् । दुइ पुस्तकका लेखक र तीन सन्तानका पिता सैमुअल्सनले सन् १९७० मा अर्थशास्त्र विषयको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका हुन् । जुन अर्थशास्त्रको दोस्रँे नोबेल पुरस्कार हो । पहिलो नोबेल पुरस्कार सन् १९६९ मा दुइ जनालाई प्रदान गरिएको थियो । ती दुइ जना हुन्ः जन टिनबर्जेन (डच) र रागनर फ्रिश (नर्वेजियन) । सन् १९४८ मा प्रथम संस्करण प्रकाशित भए पछि सैमुअल्सनले यसमा निरन्तर सुधार, परिमार्जन र थपघट गर्दै रहे । त्यसैले उनले भने ः मेरो कपाल कालोबाट खैरो (सेतो) भइसक्यो तर मेरो यो पुस्तक भने सधैं एक्काइस वर्षको जस्तो जवान छ । भर्खर जवानीमा पाइला टेक्दै । यस पुस्तकको पांचौं संस्करण (सन् १९६४) कीर्तिपुर केन्द्रीय पुस्तकालयमा रहेको छ । जसमा लगभग चारशय पृष्ठ छन् । यसको दशौं संस्करण (सन् १९७०) मा ९६० पृष्ठहरु छन् । पुस्तक आकार र पृष्ठ दुवै कुरामा दोब्बर छ । सबैभन्दा लोकप्रिय रहेको संस्करण पनि यही नै हो । अर्थशास्त्रीहरुले स्याम्युएल्सनलाई उद्धरित गर्दा यसै पुस्तकबाट गर्न मन पराउंछन् । सन् १९९७ मा प्रकाशित हुंदा यस पुस्तकमा ७८४ पृृष्ठ रहेका छन् । दशौं संस्करण सम्म छ भाग रहेको यो पुस्तक १४ औं संस्करणमा आए पछि सात भागमा विभाजित हुन पुग्यो । यस संस्करणमा अरु परिवर्तन पनि गरिएको छ । यस संस्करणमा अर्थशास्त्रलाई दुई मुख्य भागमा बांडिएको छ– माइक्रो र म्याक्रो । (यस पुस्तकको पहिलो संस्करण प्रकाशित हुंदा यी शब्दहरु अर्थशास्त्रमा जन्मेकै थिएनन् । उनले दशौं संस्करणमा आफुले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषालाई यस संस्करणमा परिमार्जन गरेका छन् – समाजले दुर्लभ साधनको प्रयोग गरेर मूल्य हुने वस्तुहरुको उत्पादन र विभिन्न मानिसहरुमा तिनीहरुको वितरण कसरी गर्छ, भन्ने कुराको अध्ययन नै अर्थशास्त्र हो । स्याम्युएल्सनले अर्थशास्त्रलाई कला विषयमा प्राचीनतम, विज्ञानहरुमा नवीनतम र सामाजिक विषयहरुको रानी भनेका छन् । अर्थशास्त्र विषयको यति राम्रो चित्रण यस अघि कसैले दिएको थिएन । यो पुस्तक पाठ्य पुस्तक भइकन पनि ज्यादै रोचक छ । पहिलो पटक पढ्नेले यसबाट अर्थशास्त्रको प्रँरम्भिक ज्ञान प्राप्त गर्छ भने गहन अध्ययन गर्नेले उच्चस्तरीय ज्ञान प्रँप्त गर्छ । जसले यसमा अर्थशास्त्रको जति गहिरो ज्ञान खोज्छ उसले त्यति नै गहन सामग्री भेटाउंछ । उत्पादन संभावना वक्र, केन्सीयन आय र उत्पादन सन्तुलन, सामाजिक कल्याण फंक्शन, ४५ डिग्री रेखामा राष्ट्रिय आय सन्तुलनको समष्टि अर्थशास्त्रको चित्र आदि दर्जनौं मौलिक रेखाचित्र तथा अर्थशास्त्रमा अन्तर समीकरणका प्रतिपादक सैमुअल्सनले लेखेका अध्यायहरुले आज सम्म अर्थशास्त्रीको मार्गदर्शन गरिहेका छन् । उदाहरणका लागि उनले लेखेको अध्याय जाति र लिंग सम्बन्धी भेदभावको अर्थशास्त्र माथि आधुनिक अर्थशास्त्रीहरुले विविध शोध गरेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापलाई जाति र लिंगले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा गरिएको शोधलाई हालै अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्राप्त भएको छ ।
पुस्तकका केही उकाली ओराली[सम्पादन गर्ने]
केन्सले अर्थव्यवस्थामा सरकारी हस्तक्षेपको अवधारणा प्रतिपादन गरे । तर यसको प्रष्ट स्वरुप मिश्रित अर्थव्यवास्था हो भनी किटान साथ समर्थन गर्ने प्रथम महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री स्याम्ुल्सन नै हनु् । उनले मिश्रित अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्दै एउटा अध्याय नै आफ्नो पुस्तकमा लेखे । सन् १९५० पछि सारा विश्व दुइ ध्रुवमा विभक्त थियो । कोही स्वतन्त्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाको पक्षमा थिए र कोही सरकारद्वारा पूर्ण नियन्त्रित समाजवादी अर्थव्यवस्थाको पक्षमा थिए । यस्तोमा दुवै थरीले स्याम्युएल्सनको मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई शंका गर्थे । एकजना दक्षिणपन्थी छात्रले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई मिश्रित अर्थव्यवस्थाको अध्याय पुस्तकबाट नहटाएमा सैमुअल्सनको बौद्धिक प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने चेतावनी दियो । सन् १९७० मा एन्टी सैमुअल्सन भन्ने दुइ खण्डको आलोचनात्मक पुस्तक पनि प्रकाशित पनि भयो । यस बीचमा विभिन्न व्यक्तिले अनेक षडयन्त्र गरेर स्याम्युएल्सनको पुस्तकलाई पाठ्य पुस्तकबाट हटाउने चेष्टा पनि गर्न थाले । उता रुस (तत्कालीन सोभियत संघ) मा पनि यस पुस्तक को अनुवाद भयो । तर स्टालिनको समयमा त्यस पुस्तकमा कडा सेन्सरसिप लागू थियो । पुस्तकमा समाजवादी प्रणालीका खराबीहरुको वैज्ञानिक विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसैले यस पुस्तकलाई सेक्सका ती पुस्तकहरु संग राखिएको थियो जुन प्रतिबन्धित थिए । तर विशेष आज्ञा लिन सक्नेले भने पढ्न पाउंथे । पछि सन् १९९० मा गोर्वाचेभको आगमन पछि पुस्तक रुसमा खुल्ला बिक्री वितरण हुन सक्यो ।
पुस्तकको लोकप्रियताको यो रुप[सम्पादन गर्ने]
अंग्रेजी भाषी क्षेत्रमा यो पुस्तक प्रत्यक्ष पढिन्छ भने अन्य देशहरुमा यसको अनूदित संस्करण चल्तीमा छ । विश्वका कुना कुनाबाट पाठकहरुले पत्र पठाएर लेखकलाई आफ्नो राय जाहेर गरे । यसै सन्दर्भमा पल सैमुअल्सनलाई एउटा यस्तो अनौठो चिठी आयो ः म माइन भन्ने ठाउँमा बस्ने १० वर्षीय पीटर क्विग्ले हुं । गतः सप्ताह म र मेरो बुवा वेलडन तालमा माछा मार्न जांदा मैले तालमा बिर्को लगाएको एउटा सीसी भेटाएं । त्यस भित्रको कागजमा यस्तो लेखेको थियो– जसले यो सीसी को बिर्को खोल्छ त्यसले एम आइ टीको प्रोफेसर पाउल ए स्याम्युएल्सनबाट केही विशिष्ट ज्ञान सिक्न पाउने छ । यद्यपि त्यस्तो कागज पल सैमुअल्सन वा उनका मित्रहरुमध्ये कसैले लेखेको थिएन । तर पनि आफ्ना पाठकलाई स्याम्युएल्सनले केही उत्तर त दिनै पथ्र्यो । केही सोचेर पल सैमुअल्सनले जवाफ लेखे ः लौ, मैले तिमीलाई एक महत्वपूर्ण ज्ञान दिन्छु । सुन – कागजमा अंकित भएको प्रत्येक कुरामा विश्वास गर्नु हुंदैन ।
चौधौं संस्करणमा आएर प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता यी अर्थशास्त्रीले पुस्तक लेख्नेकाम बाट अवकाश लिने घोषणा गरे । पल सैमुअल्सनले अब फेरी आफ्नो ब्याडमिन्टनको कोर्टमा फर्कने र पुस्तक लेखनको संसारबाट बिदा लिएर घर परिवारको संसारमा फुर्सतिलो र आनन्दपूर्ण जीवन बिताउने कुरा उल्लेख गर्दै पुस्तक संशोधन, परिमार्जन र प्रकाशनको जिम्मा पूर्णतः आफ्ना पुराना शिष्य र वर्तमान सहकर्मी विलियम नोर्ढासलाई सुम्पे । अहिले यस पुस्तकलाई उनकै शिष्यले निरन्तरता दिइरहेका छन् । इकोनोमिक्स पुस्तक मार्फत पल सैमुअल्सनले एडम स्मिथले सुरु गरेको र जे एस मिलले उच्चता प्रदान गरेको अर्थशास्त्र विषयलाई बीसौं शताब्दी भर लोकप्रिय बनाउन ठूला योगदान गरेका छन् । 
↑ पल सैमुअल्सन एन्ड नोर्ढास, इकोनोमिक्स (१४ एडिशन), मैक्ग्रा हिल , वाशिंगटन, सन् १९९७
↑ ज्ञवाली, बाबु राम, वि।सं।२०५६, विश्वमा सबभन्दा बढी बिक्री भइरहेको अर्थशास्त्रको पुस्तक, दीपिका अंक ३, राममणि बहुमुखी क्याम्पसको प्रकाशन
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=पल_सैमुअल्सन&oldid=665259" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १६:२०, ५ अगस्त २०१८ मा परिवर्तन गरिएको थियो।